Isola iSundowns ngokuzama ukuyixhaphaza inkampani ephethe uMosimane - Impempe
Isola iSundowns ngokuzama ukuyixhaphaza inkampani ephethe uMosimane
UPitso Mosimane noPatrice Motsepe
Isiziphendulele ngokufakwa enkantolo yiMamelodi Sundowns inkampani ephethe uPitso Mosimane iMT Sports Marketing and Management. Le nkampani ngekankosikazi kaMosimane uMoira Thlagale.
ISundowns ibopha uMosimane nomkakhe ngoba ibasola ngokuthi bayikweleta imali engaphezulu kuka-R7-million. Le mali yakhokhelwa iMT Sports Marketing and Management njengenkokhelo ngoba yayimele uMosimane ezingxonxweni zenkontileka entsha.
Ibasola ngokuthi bayiqola ngoba uMosimane washiya kuleli qembu esasebenze izinyanga ezine ngenkontileka yakhe entsha obekungeyezinyanga ezingu-48. Le nkampani ithi kuyayethusa ukufakwa enkantolo ekubeni kade yayicela ukuhlala phansi nabaphathi ukuze baxoxisane ngalolu daba kodwa izitshwa.
“Ithukile futhi iphoxekile iMT Sports Marketing and Management ukuthola amasamanisi asuka kwiMamelodi Sundowns ifuna ukukhokhelwa imali yayo. ISundowns yasixuma ngalolu daba, sazama ukuthola isixazululo esizojabulisa zombili izinhlangothi. Kodwa abazange basiphendule uma sicela ukuhlangana nabo kuxoxwe.
“Sazama ukukhuluma nobengumengameli weqembu, uDkt Patrice Motsepe ngoJanuwari nonyaka, sachithwa. Nangesonto elidlule sizamile ukuthola usihlalo, uThlopane Motsepe, savele sazitshwa,” kusho iMT Sports Marketing and Management esitatimendeni.
“Ukuputshuzelwa kwalolu daba kwabezindaba akukuhle futhi kunenhlese yokusisabisa. Lokhu kuqhamuka nje azikahlali phansi izintuli esasuka ngeviki elidlule la iqeqebane labalandeli beSundowns bathuka khona uPitso nomama wakhe.
“Amasamanisi nokuputshuzelwa abezindaba ngalokhu kuphikisana nezibusiso zikaDkt Motsepe ngokunqanyulwa kwenkontileka, emfisela okuhle uPitso njengoba wayejoyina i-Al Ahly ngonyaka odlule.
“Ekhuluma ngalokhu, uDr Motsepe wathi: ‘Sengikusho kaningana kule minyaka edlule ukuthi ngiyomeseka uPitso Mosimane uma eshiya iSundowns eyoqeqesha enhla ne-Afrika noma phesheya noma kwiBafana Bafana.’
“UPitso uwenza kahle umsebenzi wakhe e-Agypt njengoba esanda kuwina iCAF Super Cup ne-Al Ahly, Wamukelwe kahle kwi-Al Ahly nasezweni lonke. Into ayifisayo wukugxila emsebenzini wakhe, aqhubeke nokufeza akubekelwe.”
Le nkampani iphinde yaziqhelelanisa namahlebezi asebhebhetheke ezinkundleni zokuxhumana la kuthiwa uThlagale useveze ukuthi uDkt Motsepe ubesebenzisa esinye sezisebenzi zakhe ukugwazela ukuthi iSundowns iwine.
“Sifisa ukukubeka kucace ukuthi uThlagale akakaze ayisho into enjalo ngoDkt Motsepe noma ke omunye oseqenjini. Kunabathile abacashile ababafuna ukusulela iMT Sports Marketing and Management ngegazi kodwa inyama ingayidlanga.”
Previous Previous post: UHunt uthi ngeke asho lutho ngokuxoshwa kwakhe yiChiefs
Next Next post: Ukhala ngokushinsthwa kwezinto kwiChiefs uKatsande